Vaovao - Arahabaina amin'ny fahombiazan'ny PROJECT PAPER THUAN ANTSIKA
Miarahaba anao amin'ny fahombiazan'ny PROJECT PAPER THUAN ANAO
Miarahaba anao noho ny fahombiazan'ny THUAN AN PAPER PROJECT izay nanomboka tamin'ny taona 2018. Ity tetikasa ity dia milina taratasy vao vita 5400/800 miaraka amina ply telo any Vietnam. Ny singa misy ny dewatering an'ny masinina dia novokarin'i Shandong Guiyuan Advanced Ceramics Co. ltd. (SICER). Taorian'ny fametrahana sy ny fanokafana tamin'ny Oktobra 2018, ny milina taratasy dia napetraka tamim-pahombiazana. Rehefa afaka hazakazaka herintaona dia nahazo fanamarihana tsara avy amin'ny mpanjifanay izahay. Ny hafainganam-pandeha dia nahatratra ny hafainganam-pandeha natao ary ny taratasy ho avy dia natao mba hananany kalitao mahafa-po. Tamin'ny andro nitsidihantsika ny fanodinana taratasy, ny hafainganam-pandeha dia 708m / min. Miaraka amin'ny fanamarinana ny fizotran'ny fihazakazahana dia manangona datas teknika ihany koa izahay ary manome serivisy asa miankina amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Ankoatr'izay dia nojerenay koa ireo faritra tsy voavoatra momba ny latabatra telo tariby telo ary nohamafisinay ny foil-keramika sy fonony izay mila omanina. Mba hanafainganana ny lavitra, dia nohamafisina ny andiana hydrofoil maromaro misy zoro samihafa.
Niaraka tamin'ny fitsidihana ny fanodinana taratasy, nanatrika ny 34 izahayfaha Fihaonamben'ny federasionan'ny Aostraliana Pulp sy Paper Industries (FAPPI) natao tany Da Nang. Manam-pahaizana, mpitarika ary mpandraharaha marobe amin'ny indostrian'ny fanaovana taratasy no nivory avy lavitra sy lavitra. Nomena santionany tsara izahay momba ny fivoarana sy ny fanantenana ny indostrian'ny fanaovana taratasy erak'izao tontolo izao. Any atsinanan'i Azia dia mbola misy ny fangatahana fanampiny sy hentitra. Vaovao lehibe ho antsika izy io eo ambanin'ny fanambinana ara-toekarena tsara. Taorian'ny fihaonambe dia nihaona tamin'ny mpanjifa samihafa izahay ary nifanakalo ny hevitray amin'ny mety fiaraha-miasa.
Mandritra izany fotoana izany, ny SICER dia hanohy manavao sy manatsara ny firafitry ny vokatra. Hoporofoinay koa ny sandan'ny fanamboarana sinoa miaraka amin'ny ohatra miavaka amin'ny anatiny sy any ampitan-dranomasina, koa miambena!